Maitiro Ekukumbira Rubatsiro Pasina Kunzwa Kusanzwisisika Kana Zvinorema - Blog
Maitiro Ekukumbira Rubatsiro Pasina Kunzwa Kusanzwisisika Kana Zvinorema
Wese munhu anoda rubatsiro diki dzimwe nguva…
Hapana munhu anogona kuve tenzi pazvinhu zvese uye dzimwe nguva basa rinenge rakakura kwazvo kumunhu mumwe chete.
Izvo harisi basa repanyama chete, senge, 'Hei! Mungandibatsira here kufambisa tafura iyi? ”
Asi zvakare basa rehupenyu… kugadzirisa nekugadzirisa zvaunonzwa, kuita sarudzo dzakanaka , kuzadzisa zvinangwa zvako uye zvinangwa, uye kuyedza kusundira kune hukuru hukuru hupenyu uye kuve nani iwe.
Idzi ndidzo nzendo dzakaomarara dzebasa, kuzvitsvaga-pachako, uye kuongorora apo patinoedza kuzviunza isu pachedu kune hutano hwepfungwa nemaonero akajeka.
Asi pane dambudziko.
Kune vanhu vazhinji kunze uko vasingazokumbira rubatsiro nekuti havadi kunzwa kusanzwisisika kana kuremedza.
Tingaite sei kuti tirege kunetseka kana kunetsa kana tichikumbira mumwe munhu rubatsiro?
Zvakanaka, mhinduro pfupi ndeyekuti, haugone.
Pachave paine huwandu hwekushushikana kana kutya mukukumbira rubatsiro nekuti kukumbira rubatsiro kunoda kuratidza kusagadzikana.
Uye vanhu, kunyanya avo vakasangana nezvakawanda kana vakakuvadzwa nevamwe, vanogona kuva nenguva yakaoma kuzvibvumira kuti vave uye vanzwe vari munjodzi.
Uyezve pane kugara uchinetseka kuti mumwe munhu haasi kuzopindura zvakanaka.
Nhau dzakanaka ndedzekuti pane nzira dzekudzora kusagadzikana uye kushushikana kana uchikumbira rubatsiro, uye nzira dzekurerutsira mamiriro acho kana iwe uri iye munhu ari kukumbirwa rubatsiro.
Ziva wauri kukumbira rubatsiro
Ndiani munhu wauri kukumbira rubatsiro kwaari? Ivo here mumwe munhu akashongedzerwa uye anokwanisa kupa iyo mhando yerubatsiro iwe yaunoda?
Maonero iwayo anofukidza akasiyana siyana ekubvunza. Uye kukumbira rubatsiro kubva kumunhu chaiye kunogona kuita kuti zvive nyore kunyatso kubvunza.
Ndinofanira here kukumbira muvakidzani wangu akwegura kuti andibatsire kufambisa mubhedha wangu? Kwete, izvo hazviite zvine musoro.
Ndinofanira kunge ndichikumbira wandinozivana naye kure rubatsiro nerutsigiro nedambudziko randiinaro? Zvakanaka, pamwe, asi pamwe kwete.
Ini ndinofanira kunge ndichikumbira rutsigiro rwehutano hwepfungwa kubva kumubereki uyo asingatendi mukurwara kwepfungwa? Izvo zvinopera zvakaipa kwandiri.
Kune akawanda akanaka-anoreva mameseji kunze uko ari kukurudzira vanhu vazhinji kuti vauye kumberi, vataure kumusoro, uye kuyedza kusimudzira nharaunda irinani yekukumbira rubatsiro.
Dambudziko risinganyanyo kutaurwa mumameseji aya ruzivo uye maitiro evanhu vaunoda kubvunza.
Une vanhu vano…
… Haufunge kuti unoda rubatsiro,
… Usatende kuti dambudziko rako rinoda rubatsiro,
… Tichave vanofara kupfuura kurira pamifungo yavo pasina kunyatsoteerera kana kupa rubatsiro,
… Vanoda kubatsira asi vasina ruzivo rwakakodzera kana ruzivo rwekuti ungabatsira sei.
Uyezve une vanhu vasina hanya neimwe nzira.
Ziva vateereri vako usati waita kubvunza, kunyanya kana iwe uchikumbira rubatsiro nedambudziko repfungwa kana remweya.
Munhu iyeye anogona kunge achikuda uye ane hanya newe, asi anogona kunge asiri kuziva nzira yekupa rubatsiro rwakakosha uye rutsigiro - uye izvo zvinogona kukuvadza.
Nzira yakanaka yekuyedza mamiriro acho ezvinhu kuyedza zvinyoronyoro mvura nekubvunza mibvunzo yakaita, 'Unofungei nezve XYZ?' kuti ndione mhinduro yavo.
Ronga Mazwi Ako Nepfungwa Usati Wabvunza
Chikamu chakakura chekutya uye kuzvidya moyo mukukumbira rubatsiro kusaziva zvekutaura uye nematauriro acho.
Ndicho chimwe chinhu chaunogona kufunga nezvacho uye kuumba usati wanyatso gara pasi kukumbira mumwe munhu rubatsiro rwavo.
Kugadzirira kwekutanga zvakare kunokupa iwe nguva yekudzidzira izvo zvaunoda kutaura zvisati zvaitika, kuitira kuti usatakure kutya kwakanyanya pamusoro pekugumburwa pamusoro pemashoko ako kana yasvika nguva yekunyatso kubvunza.
sei kuva anodakadza musikana wako
Maitiro aunosvika kubvunza anoenderana nezvauri kunyatsokumbira uye kuti ingani rubatsiro rwaunoda.
Pazvinhu zvisina kunyanya kukosha, unogona kushandisa majee uye kuseka kuita iyo inobvunza, senge kupokana newaunoshanda naye kana iwe uchida rubatsiro pane chirongwa.
Mune mamwe mamiriro akakomba, kupfupika uye kujekesa inzira iri nani.
Munhu anotya kana angave nematambudziko nekushamwaridzana nevanhu anogona kuzviwana achitsika nemazwi avo kana kugovana-pamusoro pavanenge vachishushikana.
Kana uchikwanisa gara wakadzika midzi munguva , Wakatarisa pane izvo zvawakatofunga kutaura, iwe unogona kudzivirira mhando yehunhu iyo inowanzo kupa kuti unzwe kuzvidzora kana kusagadzikana.
Imwe nzira ndeyekutarisa kutanga hurukuro, pane kungo wedzera ruzivo kune munhu ari kuteerera.
Nenzira iyoyo iwe unogona zvakare kuyedza mvura kuti uone kuti munhu anogamuchira sei kana kuteerera kana kukweretesa ruoko rwekubatsira.
“Hei, ndinogona kutaura newe kweminiti here? Ndine dambudziko neXYZ uye ndinogona kushandisa rubatsiro. '
Maitiro aya anokutendera kujekesa nzira yekuita hurukuro yaunoda kuve nayo.
Izvo zvakare zvinokupa iwe mukana wekuyedza mvura usati waburitsa chero chinhu chakavanzika kune mumwe munhu angave asingabatise tsime iro.
Uye zvinopa mumwe munhu mukana wekuramba usati waisa zvese pachena uye ukafumura kusagadzikana kwako kwavari.
nhetembo dzekunyaradza vakafirwa
Maitiro Ekuratidza Kunzwa Kwako Mumashoko
Maitiro Ekurega Kumhanya Kutiza Kubva Kuneako Matambudziko
Maitiro Ekurega Kuva Akaomesa musoro
Maitiro Ekubatanidza Uye Kushanda NemaMweya Guides
Tora Chiito Nokukurumidza Panzvimbo Yekupedzisira
Kuzvidya mwoyo kunoita basa mukudzivirira vanhu vanokumbira rubatsiro.
Zvingave zvinotyisa kana tikakwanisa kubuda pano tokuudza kuti pane nzira yakajeka yekufambira mberi pasina chero manzwiro ekusagadzikana zvachose, asi hapana.
Iwe unenge usinga gadzikane uye chingori chinhu chaunofanirwa kubvuma semutengo unobatana nekukumbira rubatsiro.
Hapana chinodzinga kushushikana nezvechimwe chinhu chaunofanirwa kuita senge kuenda chaiko uye kuita chinhu icho.
Kana iwe ukagara kwenguva refu uye uchifunga nezvazvo, iyo yakawanda nguva kusahadzika kwako kunofanirwa kubuda mukutonga uye kuomesa zviito zvako.
Kunonoka zvakare kunodzosera kumashure kugona kwako kuita zviwanikwa zvakakosha uye shanduko. Kana iwe ukamirira kwenguva yakareba, iwe unotora nguva yakareba.
Nenzira dzose, tora nguva yekufunga nezvazvo uye gadzira maitiro, asi usazviregedze kugara panhau yacho nekusingaperi.
Ukakurumidza kutora chiito, nekukasira iwe unozogona kurega kunetseka ikoko kuenda uye kusundira kumberi kune rakabudirira resolution.
Kuratidza Tsitsi Paunokumbirwa Rubatsiro
Kubvunzwa rubatsiro kunogona kunge kuri kusagadzikana chiitiko, asi hazvifanirwe kudaro.
Funga nezvemhando yerubatsiro iwe yauri kukumbirwa, kana chiri chinhu chaunokwanisa kuita, uye kana chiri chimwe chinhu chinokanganisa hupenyu hwako.
Miganhu chikamu chine hutano hwe kuratidza tsitsi kune vamwe vanhu ...
… Dzimwe nguva haugone kubatsira.
… Dzimwe nguva rubatsiro rwauri kukumbirwa rwakanyanya.
… Dzimwe nguva unenge usiri panzvimbo yakanaka zvakakwana kuti upe rubatsiro rwavari kukumbira.
… Uye dzimwe nguva unogona kunge usina hunyanzvi, ruzivo, kana kugona kupa irwo rubatsiro.
Zvese izvi zvinhu zvakanaka. Kana iwe usingakwanise kubatsira, ingo tarisa kusaita zvinokuvadza.
Pfungwa idhimoni gumi nemaviri. Kunyangwe zvingave zvinokwezva, kazhinji zviri nani kuchengeta pfungwa dzemunhu kune dzake zvinhu zvakaomarara kana zvakapusa. Saka funga usati wataura .
Izwi risina mutsa rakataurwa panguva isiriyo rinogona kuita kukuvadza kukuru kumunhu nekukonzera kuzvipokana ivo nevamwe kusvika padanho rekusazobvunza rubatsiro munguva pfupi iri kutevera.
Izvo zvinogona kukonzeresa makore ekutambura kusiri madikanwa kana munhu wacho asingakwanise kuzunza iwo mafungiro.
Maitiro akasimba kana iwe usingakwanise kupa rubatsiro urwo rwunokumbirwa nderwekuti, 'Handinzwe sechinhu chandingakubatsira nacho, asi ndinogona kukubatsira kutsvaga mumwe munhu anogona.'
Vanhu vazhinji havazive kwekuenda kuti vatsvage rubatsiro rwavanoda. Kuva nevanhu vaviri vari kuyedza kuiwana kunogona kurerutsa mutoro pamunhu ari kuita kukumbira uye kuita kuti vafambe munzira iri nani, ine hutano.
Dzimwe nguva vanhu vanoda kunzwa sekunge vari kunzwisiswa, kuti mumwe munhu ari kudivi ravo. Nzira yakapusa yekuita izvozvo ndeyekuti ivo vatungamire nhaurirano uye kwete kuvakunda nemaonero ako nepfungwa dzako.
Dzidzira Mutsa Kwauri Uye Nevamwe
Zviitire mutsa , kwete kune vamwe chete. Zvakaoma kukumbira rubatsiro, uye dzimwe nguva zvakaoma kukumbirwa rubatsiro.
Asi isu tese tinoda kubatsirwa dzimwe nguva.
Vanhu venyama vane hunhu, zvisikwa zvepamoyo zvinoda mumwe nemumwe munzvimbo dzakasiyana.
Kunyanya patinogona kushanda pamwe chete, mhedzisiro iri nani yatinogona kuwana mune ese mativi ehupenyu hwedu, kunyangwe iri kushanda pahutano hwepfungwa kana kuyedza kuwana chimwe chinhu kuitirwa basa.
Zvese zvaunogona kuita ndizvo zvaunogona.
zvinoratidza kuti ari mauri
maitiro ekuita kuti mumwe munhu anzwe achikosheswa
zvinhu zvakanakisa zvekuita kana iwe uchinetseka
zvinorevei kana akakutarisa
nzira dzakanaka dzekutanga tsamba yerudo